Nhau - Zvishandiso zvecalcium poda
1. Calcium powder yeindasitiri yerabha
Karusiyamu upfu kuti rabha-rabha: (400 pajira riya, chena: 93%, calcium kugutsikana: 96%). Calcium powder ndeimwe yemafuta makuru kwazvo anoshandiswa muindasitiri yerabha. Yakawanda huwandu hwecalcium poda yakazadzwa nerabha, iyo inogona kuwedzera huwandu hwezvigadzirwa uye chengetedza anodhura epanyama rabha, nokudaro ichideredza zvakanyanya mutengo. Karusiyamu upfu hwakazadzwa murabha kuti uwane yakasimba tensile simba, kubvarura simba uye kupfeka kuramba kupfuura yakachena rabha vulcanizates.
2. Calcium powder kukosha kwepurasitiki indasitiri
Plastiki masterbatch uye color masterbatch shandisa calcium powder 400 mesh. Kuchena kunodiwa kuti ugare usina kuchinjika mushure mekupisa kwakanyanya kwekushisa. Iyo ore chimiro hombe sekristaro calcite calcium upfu zvemukati: 99%, kuchena: 95%), calcium upfu inogona kushandiswa mune epurasitiki zvigadzirwa Kune imwe mhando yemabhonzo mhedzisiro, ine simba rakakura pane iyo yeenzvimbo kugadzikana kwepurasitiki zvigadzirwa, uye inogona zvakare wedzera kuomarara kwezvigadzirwa, uye nekuvandudza kumeso kubwinya uye kumeso kutsetseka kwezvigadzirwa. Sezvo kuchena kwecalcium carbonate kuri pamusoro pe90, inogona zvakare kutsiva machena machena pigments.
3. Calcium powder yeindasitiri yepende
Karusiyamu upfu 800 pajira riya kana 1000 pajira riya kupenda uye latex pendi, chena: 95%, calcium carbonate: 96%, uwandu karusiyamu upfu muindasitiri pendi iriwo rakakura, semuenzaniso, huwandu hunopfuura makumi matatu muzana mupende gobvu. .
4. Calcium poda yemvura-yakavakirwa indasitiri
Karusiyamu upfu 800 pajira riya kana 1000 pajira riya mvura-kwakavakirwa pendi, chena: 95%, karusiyamu upfu: 96%, karusiyamu upfu iri zvinowanzoshandiswa mvura-anotsanangura pendi indasitiri, anogona kuita kuti pendi regai kugadzikana, nyore kupararira, kubwinya kwakanaka uye humwe hunhu, muUwandu hwependi-yakatarwa pendi iri 20-60%.
5. Calcium poda yeindasitiri yemapepa
325 mesh rinorema calcium poda yekugadzira mapepa, kuchena chinodiwa: 95%, calcium upfu zvemukati: 98%, calcium poda inoita basa rakakosha muindasitiri yekugadzira mapepa, inogona kuona simba uye kuchena kwepepa, uye mutengo wakaderera.
6. Calcium powder yeindasitiri yekuvaka (yakaoma dhaka, kongiri)
Karusiyamu upfu 325 pajira riya kuti yakaoma dhaka, chena chinodiwa: 95%, karusiyamu upfu kugutsikana: 98%, karusiyamu upfu anoita basa rinokosha mune kongiri ari kuvaka indasitiri. Kwete chete kuti mutengo wekugadzira unogona kudzikiswa, asiwo kuomarara uye kusimba kwechigadzirwa kunogona kuwedzerwa.
7. Calcium poda yeinodziya moto indasitiri
Karusiyamoni upfu 600 meshes for fireproof ceilings, kuchena chinodiwa: 95%, calcium powder zvemukati: 98.5%, calcium powder inoda kushandiswa mukugadzirwa kwema fireproof ceilings, ayo anogona kugadzirisa kuchena uye kupenya kwechigadzirwa, uye iyo isina moto kuita. zvichawedzerawo.
8. Calcium poda yeyakagadzirwa indasitiri yemarble
Karusiyamu upfu hwokugadzira machena 325 pajira riya, chena chinodiwa: 95%, karusiyamu upfu kugutsikana: 98,5%, yakachena uye isina tsvina, karusiyamu carbonate rave kushandiswa zvikuru chakagadzirwa chakagadzirwa machena.
9. Calcium poda yeuriri tile indasitiri
Karusiyamu upfu 400 pajira riya uriri usina kukonekita, chena chinodiwa: 95%, karusiyamu upfu kugutsikana: 98,5%, yakachena uye hapana tsvina. Karusiyamu upfu inogona kushandiswa uriri chibooreso maindasitiri kuwedzera chena uye tensile simba chigadzirwa, kuvandudza kuoma chigadzirwa, uye kuderedza kugadzirwa mutengo.